Tsy io tanàna io irery no tsy nivonona tamin’ny firotsahan’ny orana tampoka. Isan’ny nitondra faisana koa ny fiara izay teny amin’ny lalam-pirenena izay marobe ny nivadika noho ny halaman’ny làlana sy ny tsy fahitàna intsony izany. Mila hamafisina hatrany ny seraseran’ny mpamantatra toetry ny andro eto amintsika mba tsy hisian’ny fahavoazana be loatra miverimberina.
Nifarana ny hetsika Mandio notontosain’ny zandarimariam-pirenena nandritry ny volana iray. Raha ny tao amin’ny faritra Atsinanana manokana dia olona telo nosokajiana ho jiolahy no maty. Miisa 15 ireo olona naiditra am-ponja noho ny fandikan-dalàna samihafa ary misy koa ny fiara 40 tsy maintsy nogiazana satria tsy nanara-dalàna ny taratasiny. Raha tsiahivina, hetsika fampandriana fahalemana alohan’ny fifidianana ity hetsika Mandio ity. Na izany aza, mila fifidiana ve vao tokony hihetsika ny mpitandro ny filaminana sa tokony ho asa andavanandron’izy ireo izany ?
HANDORO VELONA NY OLON-TIANY
Teo am-piomanana ny handoro velona ny olon-tiany ilay lehilahy antsoina hoe Patrick no tonga tampoka ny mpitandro ny filaminana. Jiolahy ilay lehilahy ary rehefa fantany fa hisaraka aminy ilay tovovavy izay mahafantatra ny tsiambaratelony amin’ny maha olon-dratsy itsy voalohany, dia naleon’i Patrick novonoina ho faty. Nisy vaovao nandeha mialoha anefa momba ity olon-dratsy ity ary efa teo am-pikonokononana ny handoro velona izy no voasambotra. Nidoboka am-ponja avy hatrany raha natolotra ny fampanoavana tao Toamasina.
FITARAINANA ENY AMIN’NY HCC
Iray volana latsaka alohan’ny fifidianana dia mbola mitohy ihany fisian’ny fitarainana eo anivon’ny HCC mba hanafoana izany. Fikambanana sy antoko politika (izay manana kandida anefa) maro no nanome fe-potoana 12 ora ho an’ny HCC mba hialàn’ny filohany Jean Eric Rakotoarisoa ary koa hamerina hatramin’ny voalohany lisi-pifidianana ka hanafoana ny efa misy amin’izao fotoana izao. Karazan’ny rediredy ihany izany satria ny propagandy aza efa lasa ary koa ny fianakaviambe iraisam-pirenena dia tsy nisy nanohitra ny fifidianana izay handeha amin’ny 7 novambra.
Feno folo amin’izao fotoana izao ny olona izay mitondra ny tsimok’aretina pesta. Ny fito amin’izy ireo no voamarina fa efa tena voa tanteraka. Na izany aza anefa ny minisiteran’ny fahasalamana dia toa mbola manafina hatrany ary milaza fa voafehy tanteraka ny valan’aretina pesta hatreto. Asa, hiandry izany hiparitaka be indray ve vao tena hanazava ny marina ? Tsiahivina fa ny fanafenana ny zava-nisy no niteraka savorovoro be tamin’ny taon-dasa ary nampikorontana ny saim-bahoaka. Dia tsy mbola handraisana lesona ihany ve ny zava-nisy tany aloha ?
Mbola mitohy ihany ny fampiasana fananam-panjakana amin’ny fanaovana propagandy. Toa izay nitranga tany Amparafaravola-Alaotra omaly. Ny kamiaon’ny BNGRC na ny birao izay misahana ny loza voajanahary, no nitatitra ireo mpanao fampielezan-kevitra an-dRajaonarimampianina omaly. Tany an-toerana io kandidà io omaly ary dia notaterina teo amin’ny kianjabe Antsahavola ireo olona, izany dia avy amin’ireo kamiaom-panjakana. Betsaka no naka sary izany. Handrasana ny fanapahan-kevitry ny Ceni satria efa mibaribary loatra ny tsy fanarahan-dalàna.
JIOLAHY TANY BRICKAVILLE
Tsy tokantrano intsony fa tanàna mihitsy no tafihan’ny jiolahy ankehitriny. Izany no nitranga tao Anjahamana-Brickaville ka naharatrana olona roa. Nitifitra avy hatrany mantsy ireo olon-dratsy vao tafiditra tao an-tanàna, izany dia entina handemena ny mponina. Tafiakatra hatrany amin’ny 18 tapitrisa ariary ny vola lasa rehefa natao ny kajikajy tamin’ireo tokantrano maro voatafika. Lasa koa ny volamena sy ny kojakojan-tokantrano samihafa nandritr’ity fandalovan’ny jiolahy ity. Voaroba ny fivarotana, ny trano ary ny olon-tsotra teny an-dalana.
Olona 17 no nidoboka am-ponja noho ny fanakanan-dalana sy fanakorontanana, momba ny raharaha Morondava. Raha tsiahivina dia tezitra ny olona noho ny fanasiana barazy ny reniranon’i Dabaraha. Nanampy trotraka ny hatezerany ny fisian’ny jiolahy izay voasambotra kanefa nisy nilaza fa efa navotsotra. Ireo raharaha roa samihafa ireo no nitarika ny olona hikorontana tao Morondava. Tsy nijanona fotsiny tamin’izao anefa fa notsiponina tsirairay izay voarohirohy ho tompon’antoka ary nadoboka am-ponja vonjimaika.
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny mponina eny Ankotrika-Ivato ary nilaza izy ireo fa manohitra ny fanohizana ny lalam-baovao izay mihazo ny seranam-piaramanidina ka mandalo amin’io tanàna io raha miala eny Andranotapahana. Ny antony dia ny fahitan’izy ireo fa tsy ara-dalàna tanteraka ity tetikasa ity. Indraindray koa anefa dia fomba fiady iray mba hangatahana vola na koa hanonerana ny vidin-tany ny hetsika toy izao.
NAMADIKA PALITAO I JAONA ELITE
Nivadika palitao tanteraka ny depiote Jaona Elite ary nilaza fa hiara-dia sy manohana an’i Andry Rajoelina. Izany no taratry ny politika eto amintsika ka mahatonga ny firenena ho latsaka an-katerena toy izao. Raha hiverenana dia ity depiote ity no anisan’ny niaro fatratra ny fitondrana Hvm ary nizara vola tamin’ny depiote hafa mba hampandany ny lalànan’io antoko io. Rehefa fantany fa tsy tafavoaka ny kandidà dia ny azy no nalefany mialoha. Niteraka resa-be sahady ity fialana nataon’ity depiote ity tao amin’ny sambo izay nisy azy.